Webinars - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ IWCA ၏ webinars နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ 2021 အချိန်ဇယားကိုကြည့်ပါ IWCA ဆရာ-Match အစီအစဉ် Webinar အစီအစဉ်.
Professional Tutors Webinar သင်တန်းပေးခြင်း
အပိုဆောင်း Webinar ပစ္စည်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များ
ဘာသာစကားမျိုးစုံရေးသားသူ Webinar ၏လိုအပ်ချက်များ
IWCA ဘာသာပေါင်းစုံစာရေးဆရာ Webinar PowerPointဒေါင်းလုပ်
မသန်စွမ်းသူများနှင့်အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစာရေးဆရာများ Webinar မှတ်တမ်းဒေါင်းလုပ်
ဘွဲ့ကြိုကျူရှင်ဆရာများ Webinar သင်တန်း
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း Webinar များအတွက်မှတ်တမ်းဒေါင်းလုပ်
အဆိုပါ Ultimate ပျော့ပျောင်းသောစာရွက်ဒေါင်းလုပ်
OUGS ကျောင်းသား ၀ န်ထမ်းများအတွက်အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာပရိုတိုကောဒေါင်းလုပ်
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌သင်၏ WC အွန်လိုင်းသွားနေသလား။ သင်၏အွန်လိုင်းကျူရှင်ကိရိယာများကိုသင်ယခင်ကထက်အသုံးချနေပါသလား။ ဒီဟာကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများရှိလား။ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် IWCA မှကူညီနိုင်မည့် webinar တစ်ခုကိုကမကထပြုခဲ့သည်။
ဤ IWCA ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ၀ န်ထမ်းများနှင့်စာရေးသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနည်းပြသင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပြသူများသည်အွန်လိုင်းကျူရှင်တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးသူတို့၏အလုပ်ကိုမင်းနှင့်အတူမျှဝေလိုကြသည်။
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၊
၁၁:၃၅: ဒန် Gallagher နှင့် Aimee Maxfield တင်ပြချက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြသခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတင်ပြချက်
11:50 - ထပ်တူကျသောကျူရှင်အကြောင်းဂျဲနဲဒီဘ်စီ၏တင်ပြချက်
12:05 - Megan Boeshart နဲ့ Kim Fahle တို့ကအွန်လိုင်းကျူရှင်လုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအကြောင်းတင်ပြချက်
12:20: Q & A အတွက်ဖွင့်ပါ
Speaker View: မျှဝေသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ webinar မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (၂၀း၂၀ အထိဘာသာပြန်များမရှိပါ)
ပြခန်းမြင်ကွင်း - စကားပြန်များနှင့် webinar မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်း)
အပိုဆောင်း Webinar ပစ္စည်းများ & အရင်းအမြစ်များ
webinar အသံဖမ်းထားသောအသံဖမ်းယူမှုကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ.
Webinar အတွက် PowerPoint ဆလိုက်များ ဒီမှာ.
ZCO နှင့် WCOnline ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ဒေါင်းလုပ်
Online Writing Center လုပ်ငန်းအတွက်အထောက်အကူပြုရန်ကိရိယာများ (Word Doc)ဒေါင်းလုပ်
Online Writing Center လုပ်ငန်းအတွက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (PDF)ဒေါင်းလုပ်
Asynchronous ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Template (Gallagher နှင့် Maxfield) ဒေါင်းလုပ်
ဤတင်ပြချက်တွင်ရည်ညွှန်းထားသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြသခြင်းဆိုင်ရာဒန်ဂါလာဂါနှင့် Aimee Maxfield ၏အခန်းကိုဖတ်ရှုရန်လည်ပတ်ပါ "အွန်လိုင်းနည်းပြဆရာမှအွန်လိုင်းသင်ယူ။ "
Pingback: အွန်လိုင်းကျူရှင်သင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ IWCA Webinar - နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စာရေးစင်တာများချိတ်ဆက်ခြင်း (CWCAB)